Ama-Anime angama-25 agcwaliswe ngezifundo zokuphila kanye nogqozi - Okunye
25 Kwama-Anime Amahle Agcwaliswe Ngezifundo Zempilo Nokugqugquzela
“Unezinto ezintathu ongakhetha kuzo. Ungadela, unikele, noma uzidele ngakho konke. ” - uLucy Heartfilia
Kukhona i-anime engiyibukayo ebizwa ngokuthi: Izingane ZaseWales. Noma ngingakaqedi, izifundo zempilo zicacile:
Ukufa kuhlala kungazelelwe futhi kungalindelekile.
Ukunikela ngeke kuxazulule izinkinga zakho.
Ngiziqoqile lezo zifundo ezi-3 zempilo futhi angikaqedi ngisho isigamu!
Lapho abantu bangaphandle bethi i-anime iyingane, bavuma kuphela ukuthi abazi lutho kangakanani. Ngoba i-anime igcwele izifundo zempilo ezinzima futhi ezakhayo. Abanye bangashintsha impilo yakho noma bakuboleke ugqozi lapho uludinga kakhulu.
Zimbalwa imibukiso yama-anime enobuntwana ngokweqiniso. Ukugcina lokho engqondweni ...
Nazi izifundo zokuphila ezingama-25 esingazifunda sonke kusuka:
1. Ikilasi Lokusocongwa
I-Assassination Classroom uchungechunge lwesikole / lwezenzo olungajwayelekile ngamanani amangalisayo wokujula nokuhlakanipha. Ngingayichaza kanjalo.
Esinye sezifundo ezinhle kakhulu zempilo ezivela ekilasini lokubulawa: Ungalokothi uyeke ukufunda ngawe, nezwe elikuzungezile.
Kokuhle noma kokubi, kunokuningi okufanele sifunde kunalokho esicabanga ukuthi kukhona. Futhi okuhlangenwe nakho ngakunye kokufunda kungamandla okusiholela ekuguqukeni nasekuzithuthukiseni.
Ukwenqaba ukufunda ngakolunye uhlangothi kukubeka ethubeni. Ongakwazi KUZOKULIMAZA.
2. UKenichi: Umfundi Onamandla Kunabo Bonke
UKenichi oguqile ngamadolo ungumfundi wasesikoleni esiphakeme ohlukunyezwayo. Usuku nosuku.
Ngelinye ilanga uzithela entombazaneni ehlala edojo, okuholela ekutheni aqale ukuqeqeshwa kwezobuciko bokulwa. Ekugcineni kumenza aqine ngokwanele ukuzivikela.
Izifundo zokuphila ezivela kule anime zicacile: Noma ngabe ubuthakathaka kangakanani, ungahlala uqina futhi ungcono.
Konke kuqala ngokuba nesibindi sokuthatha isinqumo bese usilandela ngesenzo.
3. Umthakathi Ondizayo
Ngizohlala ngisho lokhu: I-Flying Witch iyona ehamba phambili ukuphumula uchungechunge lwe-anime sonke isikhathi.
Imayelana nomthakathi oqeqeshwayo othunyelwe ukuyohlala nomndeni wakhe emaphandleni. Ngenhloso yokufunda ukuthi ungaba kanjani ezimele futhi onomthwalo wemfanelo.
Isifundo sempilo esivela kulolu chungechunge lwe-anime olubekiwe yile: Gcina izinto zilula.
Ngizwa sengathi i-anime ikuveza kahle lokhu. Ngendlela eyiqiniso, nangendlela eyenza uqaphele ukuthi ayithathi okuningi ukujabula ngeqiniso.
4. Udrako Ibhola Z
I-Dragon Ball Z ayidingi kungeniswa. Kungezinye zezizathu ezithi i-anime isadlala ngo-2018!
I-DBZ inezifundo eziningi zempilo, njenge:
Lapho usebenza kanzima ngokwakho, uzophumelela ngokwengeziwe.
Akunandaba ukuthi uphumelele kangakanani, kuhlala kukhona umuntu laphaya ozuze okuningi.
Izinselelo zempilo azipheli.
Futhi yizifundo zempilo ezinjengalezi ezenza i-DBZ ibe yi-anime yodumo.
Ikhishwe ngo-2017, i-Fate Apocrypha ilandela impi yoqobo yama-grail 50+ iminyaka ezayo. Ukuqhubeka kusuka ku-Fate Zero / Fate Stay Night.
Izindlela zokuthatha ezinkulu ezivela ku-Fate Apocrypha yilezi:
Impilo yakho inenani, noma ngabe awukwazi ukuyibona.
Wonke umuntu unesikhathi esedlule esigcwele ubuhlungu, ukuzisola, izinqumo ezimbi noma ukungalungi.
Impilo yilokho okwenzayo ngakho.
Futhi abalingiswa abakhulu bapenda leli qiniso ngaphandle kwamandla.
6. Umdlalo Omusha!
IGame Game entsha ikhishwe okokuqala ngo-2016, ngesizini yesibili ekhishwe ngo-2017. Kumayelana no-Aoba Suzukaze, nohambo lwakhe lokuba ngumklami womdlalo njengalokhu abehlale ephupha.
Ukuthatha okukhulu kunakho konke kusuka kuNew Game ngukuthi: Kuhlala kunentengo okufanele uyikhokhe, ikakhulukazi uma wenza into oyithandayo.
U-Aoba Suzukaze ufunda lokhu ngenkathi esebenza amahora angapheli emsebenzini wakhe wamaphupho. Ukukhathazeka akususi noma imiphi imizabalazo noma izithiyo ongase uhlangane nazo.
7. Ispice Nempisi
UKraft Lawrence ugijimela kuBunkulunkulu obunqunu, futhi ngokumangalisayo wakha ubambiswano naye ngaphambi kokuba i-adventure yabo iqale.
Mhlawumbe akusona isingeniso esijabulisa kakhulu kwi-anime, kepha okulandelayo kungenye yezigigaba ezinhle kakhulu ezibonwe ku-anime.
Izifundo zokuphila ezinkulu kakhulu ozifundile:
Ungazithengisa kanjani futhi unxenxe abanye.
Ukubaluleka kokuphakelwa kanye nokufunwa.
Ukukhetha umlingani webhizinisi kungenza noma kuliphule ibhizinisi lakho.
8. I-Amagi Brilliant Park
Ipaki yengqikithi isengozini yokuvalwa, unomphela. Ngakho-ke u-Izusu Sento uqasha umfana ogama lakhe linguKanie ukuxhasa ibhizinisi labo. Lesi yisisekelo sendaba yomlingo (i-pun ehlosiwe).
Izifundo zokuphila ezinkulu kakhulu ezivela e-Amagi Brilliant Park:
Uma uhlanganisa izingqondo zakho, kuyamangaza ongakufeza.
Ukuthengisa uma kungukuphila kwegazi lebhizinisi.
Noma izingqinamba zifakwa kubalingiswa, bayakwazi ukusikhipha, basize ibhizinisi lichume futhi.
9. Iphasi le-Psycho
IPyycho Pass uchungechunge lwamaphoyisa / i-sci-fi olususelwa esikhathini esizayo esikude. Lapho iholograms, amarobhothi kanye nezibhamu zesikhathi esizayo kujwayelekile.
Ukubeka eceleni udlame lokusangana nezindikimba ezimnyama eceleni, iPyycho Pass izokufundisa:
Kungani kubalulekile ukuhlala uzolile ngaphansi kwengcindezi.
Ukuphonsela inselelo imicabango evamile.
Amandla wozwela, ikakhulukazi ezimweni eziyinkimbinkimbi.
10. ISakura Quest
Izizinda ezinhle zikaSakura Quest nezinhlamvu ezihlukile zenza lesi siqeshana sempilo sibe ngaphezu kwalokho okubonakalayo.
Futhi njengoFlying Witch, iSakura Quest ibekiwe emuva futhi inemizwa lapho kudingeka.
Izifundo zokuphila ongazifunda: Ukuxhumana kuyikho konke. Ngaphandle kwayo, uzohluleka ukusebenzisana nanoma ngubani. Ikakhulukazi uma kunzima ukuyiqonda.
Uma ukwazi ukukhuluma kahle, uzimisele futhi uyakwazi ukubona ngani abantu abathile bayile ndlela abayiyo. Futhi lokho kuyasiza ukunciphisa ukungqubuzana, futhi kukhuthaza ubudlelwano.
Inhloso enkulu ku-Akame Ga Kill: ukudiliza uhulumeni okhohlakele nokwakha inguquko.
Phakathi kobuhlanya obuse-Akame Ga Kill, ufunda izifundo zempilo ezinjengalezi:
Impilo ayinabulungisa, kepha kusamele uthathe isinqumo sokuthi wenzeni ngakho.
Uma ufuna okuthile, kufanele uthathe isenzo futhi uzimisele ukuphatha izingozi eziza nakho.
Ungalibukeli phansi inani lempilo. Ungahle uzisole.
USamurai Champloo ukhuluma ngoFuu, intombazane eneminyaka engu-15 ubudala efuna iSamurai enuka ubhekilanga. Ngemuva kokungabi namakhaya, uqasha uMugen noJin ukuba bamsize endleleni.
Ukubeka eceleni izithombe eziyingqayizivele ze-Samurai Champloo nokuxoxa izindaba okwesikhashana, izindlela ezinkulu ezithathwayo yilezi:
Izinqumo ezilukhuni ezinye zezinqumo ezinhle kakhulu ongazenza.
Uma kuyesabisa, kwenze. Futhi nakanjani uzokhula kokuhlangenwe nakho.
Thatha umthwalo wemfanelo ngezenzo zakho.
13. Ukuphila kabusha
Isikole / ucezu lochungechunge lwempilo mayelana neKaizaki Arata. UNEET oneminyaka engama-27 onikezwe ithuba lokushintsha impilo yakhe.
Ukuthatha okukodwa okukhulu kusuka kuReLife ngukuthi: Akunandaba ukuthi usufike kude kangakanani, ungahlala uqale phansi futhi uguqule impilo yakho.
Abantu bacabanga ukuthi uma usuneminyaka ethile, impilo isiphelile. Kepha kwabaningi lesi sitatimende siyinkunzi. Konke kuqala ngesinqumo sokubuyisa injabulo yakho.
14. Inkosazana esikiwe
IPacifica Casull ishiywe iseyingane futhi ishiywe kucatshangwa ukuthi ishonile, kuze kube yilapho umfowethu nodadewabo bemhlenga futhi bemamukela emndenini wabo.
Kungumdlalo wesikole wakudala onezifundo ezithile zokuphila ngamandla. Omunye wabo kungukuthi: Umndeni uyigama elinezinhlamvu ezi-6 nje.
Lapho umndeni wakho ngegazi ekulahla, incazelo ye umndeni ilahlekelwa incazelo yayo.
Umndeni usho noma yini oyifunayo. Kusho izinto ezehlukene kubantu abehlukene.
15. Umgcini Womoya
Uchungechunge lomlando mayelana nenkosana ephoqelelwe ukushiya umbuso wayo, nonogada wesifazane onenkontileka yokumvikela.
Nazi izifundo ezinkulu kakhulu zempilo ezivela kuGuardian Of The Spirit:
Abantu bangakwazi ukungenangqondo ngezizathu ezingalungile.
Abanye abantu bahlonipha amasiko ngaphezu kokubheka impilo yabanye.
Lapho impilo inzima, ukudela kuzokwenza kube nzima kakhulu. Ngakho qhubeka futhi ube namandla ngokwengeziwe.
16. Umakoti Wami Uyintandokazi
UMlobokazi Wami Ungumlingisi ochungechungeni lwamahlaya. Futhi noma abantu ngephutha bakholelwa ukuthi amahlaya awakwazi ukukufundisa izifundo ezibalulekile, okuphambene kuyiqiniso.
Ezinye izibonelo zezifundo zempilo ku-My Bride Is Mermaid:
Bonke ubuhlobo budlula ezilingweni nasezinsizini.
Ukungalaleli umlingani wakho kubangela izingqinamba ezingenasidingo, ezikwazi ukonakalisa ubuhlobo bakho.
Lokho umuntu akushoyo ngawe kusho okuningi ngaye.
Impilo imayelana nokuzijabulisa, futhi wenze konke okusemandleni akho ngenkathi ukuyo.
UShiki uchungechunge lwe-anime olunodlame olunengekayo ohlotsheni olwesabekayo / lwemfihlakalo. Kepha eziwombeni zokuqala, ikukhohlisa ukuthi i-anime ilula futhi 'iphephile' ezinganeni.
Ngaphandle kwalokho, yilokhu ozokufunda kuShiki ngemuva kokubuka lonke uhlelo:
Usongo olukhulu emphakathini yithi uqobo.
Lapho sesaba izinto esingaziqondi, kuholela ekonakalisweni.
Yiba nengqondo lapho wonke umuntu okuzungezile engenangqondo.
18. IHigurashi: Lapho Bakhala
NjengoShiki, kunezifundo zokuphila ezinonya, izigcawu, iziqephu nemicimbi edlalwa eHigurashi. Futhi ngamunye akalindelekile ukulindela.
Nazi ezinye izifundo ezimnyama, ezijulile zokuphila ezivela ku-Higurashi:
Wonke umuntu unecala elimnyama.
Ukwesaba ubuhlungu noma isipiliyoni sokulimala kungaholela enhlekeleleni nasebudloveni.
19. Ikilasi Lama-Elite
Kwenziwe ngabadali abafanayo ngemuva: I-Assassination Classroom, iClassroom Of The Elite yabelana ngama-vibes afanayo nezifundo zempilo.
Ukuthatha okukhulu kunakho konke kulolu chungechunge olunonya, nokuncintisana yilokhu: Impilo ingumncintiswano, futhi abanye abantu bazokuchitha ukuze unqobe.
Impilo ingumncintiswano noma ngabe wenzani noma ulandela ini. Ukuphika lelo qiniso kuzilimaza wena.
20. Inhlamvu Emnyama
Ngaphandle kwesifinyezo se: amantombazane amancane asindisa umhlaba, IBlack Bullet ijule kunabantu abaningi abazimisele ukuyivuma. Kuchungechunge lwesenzo / imfihlakalo enezindikimba ezithile eziphazamisayo.
Ezinye zezindlela zokuthatha ezinkulu ezivela ku-Black Bullet yilezi:
Abantu bayakuzonda abangaqondi. Futhi inzondo iholela ebudloveni obungenangqondo.
Awazi ukuthi abangani bakho beqiniso bangobani uze ube sesimweni esibi kakhulu, noma bakubone ukuthi ungubani ngempela.
Lona kuphela, futhi mhlawumbe uchungechunge olungcono kakhulu lwe-anime ngempilo yabathengisi bezikhali. Okungumuntu othengisa izikhali ukuze aziphilise.
Ngenxa yokuthi iJormungand iyiqiniso kangakanani, izifundo zokuphila zinokujula nomthelela omningi. Nakhu ongakufunda kule anime:
Izwe liyindawo enonya egcwele izifiso zobugovu, zokuhaha.
Sazisa izibhamu, izikhali, amandla nokulawula ngaphezu kokuba sazisa umusa nemfundo.
Injabulo iyisinqumo, yize kunezimo zakho.
Uma ubuke uClannad usuvele uyazi ukuthi yiziphi izifundo zokuphila ezizayo.
Lolu chungechunge lwezothando oludabukisayo luveza isithombe esibi sobudlelwano nokukhulisa izingane. Ngoba ayihlali ihle njalo njengoba yenziwa.
Izifundo Zempilo KaClannad:
Ukuba nezingane kuyingozi.
Uthando lunzima, futhi ukuzibophezela kumlingani wakho wokuphila kunzima kakhulu.
Impilo ayinabo ubulungiswa, futhi ezinye izinto azisalawuleki.
Ukucindezeleka kungenye yezinkinga ezinkulu umuntu angabhekana nazo.
23. I-Love Live School idol Project
I-Love Live iyi-anime enezinye izifundo ezigqamile, ezingaphezulu ze-chipper esingafunda kuzo. Okuyikhefu elihle ezifundweni zempilo emnyama engizibalile kuze kube manje.
Nakhu ongakufunda kulesi siqeshana sochungechunge lwempilo / umculo we-anime: Ukubambisana akwenziwanga kahle. Kanjalo namandla okuxhumana.
Kunzima ukuzwana uma useqenjini eligcwele amalungu e-9 anobuntu obuhlukile. Lesi yingakho amaqembu amaningi omculo angahlali.
Yingakho ukusebenzisana nokuxhumana zibaluleke kakhulu futhi zivame ukunganakwa. Ngaphandle kwalezi zinto ezi-2, akunakwenzeka ukuzwana nanoma ngubani. Ikakhulukazi lapho nonke nizama ukufeza into efanayo.
24. UMfundisi Wasebukhosini
Ikhishwe ngo-2017, iRoyal Tutor yagqama njenge-anime egxile kwezemfundo nasekuzithuthukiseni. Lezi yizindikimba eziqine kakhulu eziqokonyiswe kusuka ekuqaleni kuze kube sekugcineni.
Nakhu ozokufunda ngokubuka lo mbukiso:
Kungani kubalulekile ukuthi ungayeki ukufunda.
Ukubaluleka kokuzazi, nokuthi kukusiza kanjani.
Ukuthi ukuba nomeluleki kungayiguqula kanjani impilo yakho.
Ukulalela kuhlala kubaluleke kakhulu kunokukhuluma.
Ngenye ye-anime yami ephezulu engaphansi Ngingancoma ukuthi wonke umuntu abuke. Ayikho into efana nayo.
Futhi iK-On yenza indawo yama-25 ! Kuphezulu ohlwini lwami lwama-animes okuzokwenza uhleke, kukusize uphumule, futhi kukunikeze ukukhululeka.
Yize le anime ingenaso isakhiwo sangempela, kunezifundo ezilula zempilo esingazifunda kuyo:
Ungathathi impilo ngokungathi sína kakhulu.
Khetha ukujabula, noma ngabe asikho isizathu sokwenza njalo.
Phula imithetho bese ugoba abanye. Kwenza impilo ibe mnandi.
Kwenze ngoba ufuna ukukwenza, hhayi ngoba ubophezelekile noma kulungile ngokwezombusazwe.
Yiziphi izifundo zokuphila ze-anime ozifundile?